Mabhendi & Matipi Vagadziri & Vatengesi | China Bandages & Tapes Fekitori
Self Adhesive bandage inonyanya kushandiswa kwekunze kusunga uye kugadzirisa. Uye zvakare, inogona zvakare kushandiswa nevanhu vemitambo vanowanzo gwinyisa. Chigadzirwa chinogona kuputirwa chakakomberedza ruoko, gumbo uye dzimwe nzvimbo, dzinogona kutamba chinzvimbo chekudzivirira.
• Yakanyorera kurapa kugadzirisa uye kuputira;
• Yakagadzirirwa kosi yekubatsira netsaona uye ronda rehondo;
• Inoshandiswa kuchengetedza akasiyana ekudzidzisa, machisa, uye mitambo;
• Kushanda mumunda, kuchengetedzwa pabasa;
Hutano hwemhuri kuzvidzivirira uye kununura;
• Kuputirwa kwekurapa kwemhuka uye kuchengetedza mhuka mhuka;
Kushongedza: kuva kwayo nekushandisa kuri nyore, uye nemavara akajeka, inogona kushandisa sekushongedza kwakanaka.
Plaster Bandage inogadzirwa neiyo gauze bhandeji inokwira pulp, wedzera purasita yeParis poda kugadzira, mushure mekunyorova mumvura, inogona kuomesa munguva pfupi kupedzisa dhizaini, ive yakasimba kwazvo kugona kwemhando, kugadzikana kwakanaka.Iyo inoshandiswa kugadzirisa orthopedic kana orthopedic kuvhiya, kugadzira mafuru, zvigadzirwa zvekubatsira zvemakumbo ekugadzira, stents yekudzivirira yekutsva, nezvimwewo, nemutengo wakaderera.